Iimfesimini ezibonisa iingcamango zendalo
I-Critique yobungqina bezenzo
I-astronomer eyaziwayo iphetha intetho yakhe kwaye ibuza ukuba kukho nawuphi na umbuzo. Inkwenkwe ibeka isandla sayo phezulu. "Ndiyayiqonda into yokuba izazi zeenkwenkwezi zinokusebenza ngayo ukuba iinkwenkwezi zide kangakanani, zinkulu kangakanani, zifudumele kangakanani, nazo zonke iintlobo zezinto," utsho. Kodwa andisayi kubona indlela abafumana ngayo amagama abo. "
[Ubungqina be-Metaphysical buchaza ukuba ukubonakaliswa kwehlabathi-ngokukodwa imbonakalo yenzululwazi yendlela izinto zibonisa ngayo indlela ihlabathi elizimeleyo ngayo kumava ethu. Iimodeli zethu ezintle zithi "zenze imifanekiso kwiindawo." Abagxeki be-anti-realist kule mbono bathi bahluleka ukuqonda ukuba yeyiphi na inkcazo yehlabathi ekhethiweyo ngeendlela zethu ezihlukeneyo zokuqonda. Ezi zichasayo zibona iingcamango ezifana nomntwana kwimbali ethatha into yokuba intlangano yesintu (amagama eenkwenkwezi) ingumntu wemvelo.]
UAbraham Lincoln ufanele ukuba wabuza enye yezincedisi zakhe:
"Ukuba ubala umsila walo njengomlenze, iindundana zinayo imilenze emingaphi?"
"Zihlanu," waphendula umsizi.
"Cha," watsho uLincoln. "Ukubiza nje umsila umlenze awuwenzi umlenze."
[Le ngqungquthela ye-anecdote eyaziwayo ibonisa ukuba zonke izinto ezivelayo zibhekiselele kwizinto ezingafaniyo, nokuba ziza kuthi, ziquka iinguqulelo zamanqaku ezinokuthi zichasene. Sinokuthetha kwaye sicinge oko sikukholisayo; kodwa into enzima, injongo ibeka imithintelo enzima kwizinto esinokuzibiza ngayo.]
Kutheni iphela indalo?
"Kukhona inkolelo echaza ukuba xa kukho nawuphi na umntu ofumanisa ukuba yintoni imvelo kunye nokuba kutheni apha, iya kutshatyalaliswa ngokukhawuleza kwaye ithatyathelwe yinto into eyinqabileyo kwaye engaqondakaliyo. . " (UDouglas Adams, umbhali weKhokelo kaHitchhiker kwiGalaxy)
"Ekuphenduleni kwimibuzo yokuba kwenzeke ntoni, ndinika isiphakamiso esifanelekileyo sokuthi indalo yethu yinto enye yezinto ezenzeka ngezikhathi ezithile." (Edward Tryon)
Ukufikelela ezantsi kwezinto
UBertrand Russell wayekade ejongene nenkosikazi eyamkela inkolelo yamaHindu yokuba ihlabathi lahlala emva kwendlovu enkulu.
Wabuza ngokuthobeka ukuba yintoni eyayixhasa indlovu, kwaye yaxelelwa ukuba yayihlala emva kwesikhomba esikhulu. Ngomonde, uRussell wabuza ukuba yintoni eyayixhasa i-tortle.
"Hayi, uprofesa", wamncoma umfazi. "Awuyi kundibamba ngaloo ndlela. Ziyihotela yonke indlela! "
Kwifilosofi yaseParis, ifilosofi ye-existentialist uJean Paul Sartre iyalela ikhofi kunye noshukela kodwa ngaphandle kwekhefu. Ngomzuzu kamva umgcini wesondlo uya kubuya efuna ukuxolisa. "Ndiyaxolisa uMnu. Sartre", uthi, "siphume ngaphandle kwekhefu. Ngaba ungathanda ikhofi yakho ngaphandle kobisi endaweni? "
[Abanye abantu abanengqiqo abanengqiqo bahlekisayo amafilosofi ezwekazi njengeHeidegger kunye noSartre ukuze bangabi nantoni (ukuphatha njengento), nokuthetha "ngeNto" njengokuba kukho into. Babenezizathu zabo, kodwa kukho, nangona kunjalo, into engavamile malunga nendlela yabo yokuthetha.]
'Ukuqina komzimba kukufundisa ukuba akukho nto ekhoyo kwindalo ngaphandle kokuba mna kunye neyakhe i-subjective ithi: ihlabathi liqulethwe ngaphakathi kwengqondo yam. Akuyiyo imbono ebanzi ngokubanzi yezizathu ezicacileyo. Kukho iinzame eziliqela zokuhlela iindibano ze-solipsists, kodwa akuzange kube nempumelelo enkulu-kuphela umntu oye wabonisa.
UBertrand Russell wathi ufumene ileta evela kumntu owayegijimayo: "UNjingalwazi uRawus Russell, ndiyindoda yokuzimela. Kutheni wonke umntu engacingi ngathi?
Kodwa njengayiphi nayiphi na imfundiso yefilosofi, ubuqili buneenkwenkwezi zalo kunye neenzuzo zayo. ULuka, ophethwe yifilosofi ePrinceton, wayesebenza nzima kakhulu ekukhuseleni ukuqina kwesibindi, kwaye ukuxilongwa kwengqondo kweenyanga ezilifundo olujulile kwaqala ukubonisa. Ngoko abafundi bakhe abathweswe iziqu bahamba bejikeleza i-hat kunye nokwandisa imali eyaneleyo yokumhlawula ukuba bathathe iholide ezintathu zeveki kwiiCaribbean. Uprofesa ova malunga nenkqubo eklasini ngelinye ilanga wancoma abafundi ngenxa yokunyaniseka kwabo.
Omnye wathi kubo, "Akunjalo konke okunyanisekileyo. Ukuba uLuka uya, wonke umntu uya. "
Ukuqonda ukuziphatha kwezemidlalo
Yiyiphi i-Ethics Egoism?
Umntu othi 'A'
I-Hemophilia kwiNdlovukazi ka-Queen Victoria
Imigaqo yeOlimpiki yeKanoe / iKayaking kunye neNqaku
Ziqhelise ekuKhuseleni iziPhulo kunye neZilumkiso kwiYunithi yesiGwebo esiSeko
Biography kaJohn Ruskin
Jonga i-SUV Rollover Statistics ukusuka kwi-NHTSA
Amanqaku ama-10 anqobayo kwi-Bowl All Time
Kutheni Kukho I-White White Meat and Meat Turkey?
5 Iimpazamo eziqhelekileyo ngokuphathelele ubomi bomnyama
5 Iimviwo zeeNgcaciso zeZikolo ezizimeleyo
Imbali yeeMidlalo yeBhodi, Ukudlala amakhadi kunye nePuzzle.
Ukukhulisa Izingane Zendlela kaThixo